I-Blender ye-3D Ngale khosi, abafundi baya kufunda ukusebenzisa zonke izixhobo zokulinganisa izinto kwi-3D, nge-Blender. Enye yezona nkqubo zibalaseleyo zasimahla kunye nezivulelekileyo zeqonga, ezenzelwe imodeli, unikezelo, oopopayi kunye nesizukulwana...
Yenza iimodeli zedijithali ukusuka kwimifanekiso, kunye nesoftware yasimahla kunye neRecap Kule khosi uya kufunda ukwenza kunye nokusebenzisana neemodeli zedijithali. -Yenza imifuziselo ye-3D usebenzisa imifanekiso, efana nenkqubo ye-drone photogrammetry. -Sebenzisa isoftware yasimahla…
Uhlalutyo lwezikhukhula kunye nezikhukhula nge-software yamahhala: I-HEC-RAS HEC-RAS yinkqubo ye-United States Army Corps of Engineers, ukwenzela ukulinganisa izikhukhula kwimilambo yendalo kunye nezinye iindlela. Kule khosi yentshayelelo uya kubona…
Fumanisa amandla oluvo olukude. Amava, uzive, uhlalutye kwaye ubone yonke into onokuyenza ngaphandle kokuba ubekho. Uluvo olukude okanye iRemote Sensing (RS) iqulethe uluhlu lweendlela zokubanjwa okukude kunye nohlalutyo lolwazi olusivumela...